Mapato eMDC Oshora Kubuda kweZanu PF muJOMIC
WASHINGTON — Bato reZanu PF rakazivisa neChipiri kuti rave kubuda muboka reJoint Monitoring and Implementation Committee, JOMIC, nezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kusabatwa zvakanaka kwemidziyo yeboka iri, yakaita sedzimotokari, nemapato maviri eMDC ari muJOMIC.
Zanu PF inoti chimwe chaita kuti itore danho iri kupera kwayinoti kwakaita hupenyu hwehurumende yemubatanidzwa, iyo yakazvara JOMIC, ichiti zvinofanirwa kungofa zvose pamwe chete.
Asi danho reZanu PF iri harina kutambirwa zvakanaka nemapato maviri eMDC, ayo anoti kubuda kweZanu PF muboka iri kuchaita kuti mhirizhonga yatanga munyika, isaburitswe pachena sezvanga zvichiitika pari zvino.
JOMIC yanga yakatarisirwawo zvakare kuongorora mafambisirwo esarudzo dzichaitwa musi wa 31 Chikunguru.
Kunyange hazvo vamwe vari kuti boka iri ranga risina meno, vamwewo vanoti ranga raedza zvikuru kubatanidza vanhu vemapato akasiyanasiyana kuburikidza nezvirongwa zvaraiita.
Mutauriri weZanu PF, VaRugare Gumbo, vanoti bato ravo rakaona zvakakodzera kuti ribude muJOMIC nekuti rakaona zvakawanda zvaiitwa nemapato eMDC zvekutyora nekushandisa motokari dzeJOMIC mumabasa emapato avo.
Vanotiwo vakaona zvisina basa kuti vagare pasi nevamwe vavo kukurukura nezvenyaya iyi.
Asi mutauriri weMDC T, VaDouglas Mwonzora, vanoti danho reZanu PF iri ndere kuda kuti ichitanga zvakare kushungurudza vanhu ichishandisa masoja, vasori pamwe nenhengo dzayo.